နှလုံးသား ဒိုင်ယာရီ: နတ်သမီးနဲ့ ချစ်တဲ့ည
ကြယ်စင်တွေ ကြွေဆင်းတဲ့ သကာလ
ခြေသံဖွဖွ ကြားလို့ လှည့်ကြည့်မိတယ်
သူလာကျွေးတဲ့ ချိုမြတဲ့ အချစ်သီး
Posted by မိုးနတ်ကြယ်စင် at 6:35 AM
စံပယ်ချို March 9, 2013 at 8:31 AM
ဖတ်ရတာ ......နတ်သမီးမှ ဟုတ်ရဲ့လားဟယ်
မင်းအရိပ် March 9, 2013 at 9:18 AM
လွယ်ဘူး လွယ်ဘူး ဟိဟိ
မိုးညချမ်း March 9, 2013 at 9:36 AM
ချိုမြိန်လွန်းလှချည်လားကွယ်“ ... အဆိပ်တက်သွားလောက်အောင်ဆိုတော့ ဖြေဆေးလေးတော့ ဆောင်ထားနော် ... ချစ်မ ... :P
ကိုကိုမောင်(ပန်းရနံ့) March 9, 2013 at 12:40 PM
ဖြေဆေး မရှိလောက်ဘူးထင်ပါတယ် မိုးညချမ်းရေ..
မိုးနတ်စွာကျယ် စားခဲ့တဲ့ အဆိပ်သီးအတွက် ဖြေဆေးက လုံးဝ မပေါ်သေးဘူးတဲ့။
အခု နှုတ်ခမ်းဖျားမှာ ချိုမြိန်နေပြီ။
တော်နေကြာ လျာဖျားကို ရောက်လာလိမ့်မယ်။
အဲဒီကနေ လျာအရင်းကို ရောက်သွားရင်တော့ သွားပြီ။ ဆေး မမီတော့ဘူး။း)
Thu March 9, 2013 at 8:10 PM
သူလာကျွေးတဲ့အဆိပ်သီးကိုစားပြီး ခုချိန်ထိအဆိပ်မပြေသေးဘူးကွယ် :P
မိုးသူ(တောင်ကြီး) March 9, 2013 at 10:02 PM
မိုးနတ်ရေ ...မိုးသူခရီးထွက်နေလို့ ပါဗျ
မိုးနတ်ကြယ်စင် March 10, 2013 at 6:58 AM
ဟုတ်ကဲ့ပါ Anonymous ရေ...
ခေါင်းစဉ်ကို ဘာလို့ မကြိုက်တယ် ဆိုတာကို
ဆိုတာ သိရတာပေါ့...စိတ်မဆိုးပါဘူးရှင် welcom ပါ :)
အမ် ! မဂျီးဂျက်ကလဲနော် * မမစံပယ်ချို *
နတ်သမီး မဟုတ်လို့ နတ်သားဖြစ်ရမလားဗျ
ဂယ်ပဲ ဂယ်ပဲ ဟွန့် :(((
မင်း ရေ....... * မင်းအရိပ် *
တကယ်ပဲ ရင်ခုန်တယ်ပေါ့လေ :P
အင်းးးးးး သူ့ကိုဆောင်ခိုင်းထားလိုက်ပါ့မယ်:) * မိုးညချမ်း *
အနေသာကြီးပါ သူကြီးရယ် * သူကြီးမင်း *
ဆေးမှီမှီ မမှီမှီ ရှင့်အပူမပါပါဘူးတော် :)))
ဟီးးးးးးး ပတ်ရမ်းနေတာ အသားလွတ်ကြီးးးးးးးးး :P
အသူ ထင်တယ် ဟိ * အသူ *
အော် အဲဂလိုကိုးးးးးးးးးးးးး * မိုးသူ(တောင်ကြီး) *
စိုးရိမ်နေတာ ဟီးးးးးး ထင်လားးးးးးးးးးး
တကယ်က အစ်ကိုမိုးကဗျာတွေ ငတ်နေတာ :)))
witch83 March 10, 2013 at 7:56 AM
အင်း.. အချစ်ဆိုတာ ညင်ညင်သာသာနဲ့ တိတ်တိတ်လေးရောက်တတ်တဲ့ ချိုသောအဆိပ်ပါပဲလား...
arr.. အဆိပ်သင့်သွားပြီ။ သွေးကြောကိုပိတ်၊ ဖြေဆေး မြန်မြန်တိုက်.. ပြီးတော့ အနှစ်တစ်ထောင်အတွင်းအားနဲ့ ကုပေးပါဗျို့  .. :P
Candy March 10, 2013 at 8:54 AM
အချစ် အချစ် အချစ် အဲ့ဒီအချစ်ဆိုတာကြီးက နားလည်ရခက်တယ် မိုးနတ်ရယ် @_@
ကြက်သီးကို တဖြင်းဖြင်း ထသွားတာပဲ
အချစ်သီးက အဲ့လောက်တောင် အဆိပ်တက်သလားကွယ်
ဒါတောင် မစားကြည့်ရသေးဘူး ဟိဟိ
ဘုန်းတောက် March 10, 2013 at 10:47 AM
မိုးနတ်ရေ ချိုမြိန်တဲ့ အချစ်သီးက အဆိပ်ပြင်းလွန်းတယ် မူးမေ့သွားလောက်အောင်ပါပဲကွယ်...
Thu March 10, 2013 at 7:19 PM
မိုးငွေ့........ March 10, 2013 at 10:22 PM
မိုးနတ်ကြယ်စင် March 11, 2013 at 6:08 AM
အစ်မ witch83 ရေ...
အစ်မပြောတဲ့ အနှစ်တစ်ထောင် အတွင်းအားပိုင်ရှင်
ဘယ်မှာရှိလဲဗျ လမ်းညွှန်ပေးပါအုံးးးးးးးးးး :P
ဟုတ်ပါ့ ကန်ရေ :) * ကန်ဒီ *
ဟိုကလေး * နွေလ *
ကလေးက ကလေးလိုနေ ဟိုဟိုဒီဒီမတွေးနဲ့ :P
အမ် ဘုန်းတောက်က အဲဒါ
ဒါ မသင်္ကာစရာပဲ :PPPPPPP
သီချင်းလာဆိုပြတယ်ပေါ့ အသူ * အသူ *
မြည်းကြည့်ပြီးတော့ ဘယ်နှယ့်နေလဲ :)))
အိမ်မက်စေရာ March 11, 2013 at 5:50 PM
ဟယ် မိုးနတ်ရေ..သူများကြွေးတိုင်း မစားရဘူးလေ ဒုက္ခပါပဲ..အဲ့ဒါဘာသီးထင်လို့လဲ စားမိရင် ရူးတက်တယ်..းD
မိုးနတ်ကြယ်စင် March 13, 2013 at 6:47 AM
ကျေးဇူးပါ အကိုဘကြိုင် :)))
roseayemaung March 13, 2013 at 7:02 AM
ရည်ဝေ March 13, 2013 at 11:10 AM
အာဒမ်နဲ့ ဧဝလည်း အဲ့သစ်သီးပဲကိုက်မိခဲ့တာလေ:D
လောင်စာ March 14, 2013 at 2:13 AM
ဖြိုးဇာနည် March 14, 2013 at 3:16 AM
နံရိုးတစ်ချောက်းပါသွားပြီလားမသိ :P သေချာပြန်စမ်းကြည့်လိုက်အုံးနော်
မိုးနတ်ကြယ်စင် March 15, 2013 at 5:05 AM
အင် ဟင် * နှင်းဆီအေးမောင် *
ဟုတ်လား မမရည်ဝေ (ရေနံသာသူ)
ဘာကို အားကျတာလဲဟင် :PPPPPPPPP
ွှအွမ် ဖြိုး * ဖြိုးဇာနည် *
အလင်းသစ် March 15, 2013 at 5:59 AM
အချစ်သီးက ချိုတယ်တဲ့လား ... အချစ်သီးတော့မသိ ကဗျာလေးကတော့ လွှတ်ချိုတာပဲကိုး.... :)
စကားလုံးတွေကို ကာရံလည်း မပျောက်စေပဲ ဒိထက်သိပ်သည်းအောင် ပိုကျစ်လျစ်လိုက်ရင် ပိုလှမယ် ... :)
blackroze March 16, 2013 at 11:15 AM
ရင်ခုန်ရသူ(ကဗျာ၊အချစ်၊ဟာသ၊အလွမ်း) March 16, 2013 at 9:13 PM
ညီလင်းနိူင် March 17, 2013 at 4:08 AM
နတ်သားလေးတစ်ပါးပဲ ဖြစ်မယ် ထင်ပါရဲ့....။
မှားရင် ဘွာတေး .....။
hninnse young March 17, 2013 at 5:39 PM
ညိမ်းနိုင် March 18, 2013 at 7:28 AM
မိုးနတ်ရေ....ရောက်သဟ....နတ်သမီးနဲ့ချစ်တဲ့ညမှာ အဆိတ်တွေတက်နေရောလားကွယ့်...... :)))
အလွမ်းမြို့ March 20, 2013 at 12:53 PM
မကြီးလွမ်းလည်း အသီးစားချင်လို့ ကျွေးစမ်းပါ ၁ လုံးလောက်။
အဆိပ်သီးဘဲဖြစ်ဖြစ် တစ်လုံးလောက်တော့ ကျွေးပါ....(လက်သီး) အဟီးး
ရိုးမြေကျ March 20, 2013 at 11:04 PM
အဲဒီအသီးတကယ်ချိုမချို အမြည်းကျွေးမှ ယုံနိုင်မယ်။
အိပ်မက်ကောင်းကင် March 22, 2013 at 1:59 AM
မမ မိုးနတ်က ကျွန်တော်မရှိတုန်း လက်စွမ်းတွေရှယ်ပြနေတာကိုး :P
ကဗျာလေးတွေကို တိုတိုလေးနဲ့ ရင်ကိုထိတယ်
မိုးနတ်ကြယ်စင် March 24, 2013 at 5:38 AM
ဟုတ်ကဲ့ပါ အလင်းရေ * အလင်းသစ် *
အဲလိုထင်လား မမပစ်ပစ် * blackroze *
ဟယ် မိုးနတ် အချဉ်ကြိုက်တာ
ရင်ခုန် * ရင်ခုန်ရသူ *
အွမ် ...ကိုကြီးညီလင်း * ညီလင်းနိုင် *
ဟုတ် လေးညိမ်းးးးးးးးးး * ညိမ်းနိုင် *
အိုးးးးးးးးးး မကြီးလွမ်းကလဲ * အလွမ်းမြို့ *
အော်အော် သူက အရင်အမြည်းစားကြည့်ချင်တာကိုးးးးးးးးးးး
အင်းလေ ဒီလိုဆိုတော့လဲ ကိုယ်ညီအမချင်း
မိုးနတ်က ဆရာစားမချန်တတ်ပါဘူး ခစ်ခစ် :)))
စတာနော် မမရိုးမြေကျ * ရိုးမြေကျ *
အိပ်မက်လေးရေ * အိပ်မက်ကောင်းကင် *
မင်းကို အမ အရမ်းသတိရနေတာ.....:)
ဒို့မောင်နှမတွေ မတွေ့တာတောင် အတော်
ကြာပါပကော....စာမေးပွဲရော ဖြေနိုင်ရဲ့လား ???